Ivibrate Apk Download Ho an'ny Android [Vibrator] - Luso Gamer
Ivibrate Apk Download ho an'ny Android [Vibrator]
Novambra 26, 2021 by John Smith
Ny hevitra momba ny vibration dia nampidirina voalohany tamin'ny smartphones taona vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, tamin'izany fotoana izany, ity endri-javatra ity dia nampidirina mba hitazomana ny olona ho mailo. Amin'izao fotoana izao, io endri-javatra io dia ampiasaina mba hampitony ny vatan'olombelona. Noho izany dia mino ianao fa mila massager tsy mampino ny vatanao dia apetraho ny Ivibrate Apk.
Raha mampiasa sehatra media sosialy maro toy ny Facebook sy Twitter ny mpampiasa finday. Avy eo dia mety ho nijery horonan-tsary maromaro mifandraika amin'ny fitaovana fanorana izy ireo. Izay ampiasaina indrindra hamerenana ny hozatra sy ny sambo simba.
Na dia heverina ho lafo sy tsy lafo aza ny fitaovana toy izany. Mety hihoatra ny dolara an-jatony ny sandan'ny fitaovana iray. Na izany aza dia nitondra ity vahaolana tonga lafatra ity izahay. Ny fametrahana Ivibrate Download izao dia hanova mora foana ny finday ho vibrator marani-tsaina.
Inona no atao hoe Ivibrate Apk
Ivibrate Apk dia fitaovana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana Android an-tserasera namboarin'ny KITE GAMES STUDIO. Ny tanjon'ny fandrafetana ity fampiharana ity dia ny hanolotra serivisy an-tserasera miampy serivisy. Aiza no ahafahan'ny mpampiasa Android manova mora foana sy mamadika ny finday android ho vibrator lehibe.
Teo aloha ny milina vibration toy izany dia nampiasaina fotsiny mba hifehezana ny hetsika samihafa. Saingy rehefa nandinika ny fampiasana tsara ny milina vibration ny mpahay siansa. Manomboka difotry ny basy samihafa ny tsena izay ampiasain'ny manampahaizana.
Na izany aza, ny fividianana ireo singa ireo dia lafo sy tsy takatry ny mpanjifa antonony. Ankoatra izany, tsy azo atao ny mitondra ireo milina ireo rehefa mandeha na mandritra ny ora fiasana. Noho izany, raha jerena ny fanampian'ny olona sy mora entina.
Niverina tamin'ny farany ny mpamorona miaraka amin'ity fampiharana android tsy mampino antsoina hoe Ivibrate Android ity. Amin'ny ankapobeny, ny fametrahana ny fampiharana Android ao anatin'ny smartphone android dia ahafahan'ny mpampiasa. Mba hankafizana maimaim-poana ny vibration isan-karazany.
Developer STUDIO KITE GAMES
Anaran'ny fonosana com.kite.ivibrate.phone.vibrator
Android takiana 5.0 ary Plus
Mba hanaovana ireo asa rehetra ireo dia tsy mila milina na zavatra fanampiny. Ampidino fotsiny ary apetraho ny kinova farany amin'ny rakitra fampiharana azo idirana avy eto. Raha vantany vao nahomby ianao tamin'ny fampidirana ny fampiharana ao anaty smartphone android.
Tsidiho izao ny menio finday, atombohy ny fampiharana ary ankafizo ny vibration isan-karazany maimaim-poana. Tsarovy, raha mampiasa ny endri-javatra, raha sendra ity olana miadana vibration ity. Avy eo dia manoro hevitra ireo mpampiasa ireo izahay hitsidika ny toerana finday ary hampitombo ny fahafaha-manao.
Satria indraindray ny mpampiasa dia mampihena ny fahombiazan'ny rafitra anatiny ary aorian'izay dia manadino ny hampitombo. Ka amin'ny toe-javatra toy izany rehefa mahatsapa ianao fa miadana ny fahombiazany. Dia tsidiho ny fanalahidin'ny toe-javatra ary mitantana ny hafainganam-pandeha araka izay ilaina.
Ny hetsi-panoherana lehibe azo tratrarina ao anaty fampiharana dia ny Mid Pulse, Fast, Calming, Waterfall, Continuous, Gust, Sleep, Strong Pulse, Horohorontany ary Fo. Ankoatra ireo lamina voalaza ireo dia azo tratrarina ihany koa ny hetsika pro hafa.
Fa ny fidirana amin'ireo hetsika pro toa ny Volcano, Bomb, Extreme ary Méditative dia mila fahazoan-dàlana premium. Midika izany fa raha tsy mividy famandrihana premium dia tsy azo atao ny miditra amin'ireo lamina ireo. Ka tianao ny endri-javatra premium maimaim-poana amin'ny Ivibrate App dia alao avy eto.
Toe-javatra manan-danja amin'ny The Apk
Maimaimpoana ny misintona rakitra fampiharana.
Ny fampidirana ny fampiharana dia manampy amin'ny fidirana mivantana amin'ny lamina samihafa.
Anisan'izany ny Mid Pulse, Fast, Calming ary Gust sns.
Ny modelin'ny riandrano sy ny torimaso dia tsara amin'ny resaka fanalefahana ny atidoha.
Bomb, Volcano, Extreme ary Blast dia voasokajy ao amin'ny fizarana premium.
Manohana doka ho an'ny antoko fahatelo ny fampiharana.
Saingy hiseho tsy dia fahita firy amin'ny écran.
Ny interface interface dia tsotra sy mora ampiasaina amin'ny finday.
Tsy mila famandrihana.
Tsy mila fisoratana anarana.
Pikantsarin'ny The App
Ahoana ny fametrahana Ivibrate Apk
Rehefa mandalo amin'ny tsenan'ny Internet an-tserasera izahay, dia hitanay maimaim-poana ity fampiharana ity. Na dia azo tratrarina aza ny fidirana amin'ny Play Store. Na izany aza, mpampiasa Android maro no tsy afaka mampiasa ny rakitra Apk noho ny olana mifanentana.
Na dia mandinika ny olana amin'ny fidirana aza dia manolotra ny rakitra Apk tany am-boalohany ihany koa izahay. Saingy mifantoka amin'ny fiarovana sy ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, mametraka ny App amin'ny fitaovana samihafa izahay. Alohan'ny hanolorana azy ao anaty fizarana fampidinana ho an'ny mpampiasa android.
Milamina ve ny fametrahana ny Apk
Eto ny fampiharana tohananay sy omenay dia original. Ary hatramin'izao dia tsy misy olana na olana iainan'ny mpampiasa Android. Noho izany, ny fitaovana dia azo antoka ny misintona sy mametraka ao anaty finday Android nefa tsy manahy.
Efa namoaka sy nizara fitaovana maro mifandraika amin'ny Fahasalamana & Fitantanana izahay eto. Raha hijery ireo fampiharana hafa azo tratrarina dia araho ny URL. Ireo dia SweatCoin Apk ary RunTopia Apk.
Noho izany dia sendra olana ianao amin'ny fitadiavana fitaovana mihetsiketsika tonga lafatra. Izany dia tsy manolotra modely isan-karazany, fa manampy amin'ny fanomezana fihetsiketsehana ihany koa. Avy eo amin'ity lafiny ity, manoro hevitra ireo mpampiasa Android izahay hisintona ny kinova farany an'ny Ivibrate Apk.
Sokajy Fahasalamana & Fitness, Apps Tags Ivibrate Android, Ivibrate Apk, Ivibrate App, Ivibrate Download Post Fikarohana
Purrfect Tale Apk Download ho an'ny Android [lalao]
Batanga Apk Download Ho an'ny Android [Sarimihetsika + Andian-dahatsoratra]